musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Australia Kuputsa Nhau » COVID-19 hotera yekuvharirwa yakapiswa muAustralia
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Moto mukuru wakapisa uriri hwepamusoro hwePacific Hotel muguta reCairns kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva Ositireriya, zvichimanikidza kubuda kwevaenzi vepahotera vanopfuura zana nemakumi matanhatu.
Mukadzi uyu akapomerwa mhosva yekupisa Queensland zviremera.
Pakanga pasina kukuvara, asi kukuvadzwa kwechivako ichi kwaive 'kwakakosha' uye kumanikidza zviremera kutamisa vanhu kune dzimwe nzvimbo dzekuvharirwa dzeCCIDID-19.
Zviremera zvakati mumwe mukadzi akabatidza moto mushure mekupedza "mazuva mashoma" ekuvharirwa kwemavhiki maviri mukati mehotera mushure mekuyambuka muQueensland kubva kune imwe nyika.
Chiitiko ichi chisati chaitika, anonzi akange akonzerawo mamwe matambudziko asina kutaurwa kuvashandi panguva yaaigara.
Vana vake vaviri vakachengetwa pasi pemapurisa, mudzimai uyu achipomerwa mhosva yekupisa nekukuvadza achida, uye ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi.
Munguva yeCOVID-19 denda, Ositireriya yakanyora vanhu vangangosvika zviuru zviviri zvekufa sezvo zvakaenda kune dzimwe nzira dzepasi rose dzekuvharira uye kuvharirwa, zvisingakanganise mafambiro ekunze chete asiwo nekufamba pakati penyika, mukuyedza kuchengetedza hutachiona hwakaderera sezvinobvira kusvika ruzhinji rwevanhu vabaiwa.
Sezvo nyika yakazogadzirira kuvhurazve miganhu yayo kune vane hunyanzvi vanotama uye vadzidzi muna Zvita 1, nyaya dzekutanga dzeiyo Omicron coronavirus musiyano dzakaonekwa muvafambi kubva kumaodzanyemba kweAfrica, zvichigona kukanganisa chirongwa.